Vanhu vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende vari kunzi vari kupambwa vachishungurudzwa.
Hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekusamisa kushungurudzwa kwevanhu, kunyange hazvo paine humbowo hwekuti vanhu vari kushungurudzwa.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti zviri kuitika munyika zvekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanhu, uye kusungwa kwevashandi, vemasangano akazvimirira pamwe nevemapato anopikisa zviri kuitika munyika pari zvino, hazvina kusiyana nezvaiitika munguva yehutongi hwaVaRobert Mugabe kanawo vaive mutungamiri weRhodesia, VaIan Douglas Smith.
Doctor Pedzisai Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, vanoti zviitiko izvi zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, havana kukunda musarudzo dzakaitwa gore rapera.
Doctor Ruhanya vanoti kusagadzikana kwehutungamiri hwavo ndiko kuri kupa kuti VaMnangagwa varambidze vanhu kuungana vachitya dzokororo yezvakaitika muna Mbudzi 2017, apo VaMugabe vakabviswa pachigaro.
VaRuhanya vanoti vatungamiri vemuZimbabwe vachazopepuka chete kana pakaita mumwe wavo anosungwa achimiswa kumatare anotongwa mhosva dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, akaita sekuHague, kuNetherlands.
Munguva yehutongo hwaVaMugabe, vanhu vakawanda vaisungwa, kushungurudzwa pamwe nekutsakatika, veruzhinji vachipomera mapurisa, mauto pamwe nevasori mhosva yekutyora kodzero dzevanhu vachitumwa nehurumende.
Zvimwe chetezvo zvinonzi zvaiitikawo munguva yehutongo hwevadzvanyiriri muRhodesia, apo vanhu vaipambwa vachitsakatiswa, kusungwa pamwe nekushungurudzwa nehurumende.